Ny antony ny tsy fahampian'ny tonga fotoana (afa-tsy bevohoka)
ianao eto: Home bevohoka Ny antony ny tsy fahampian'ny tonga fotoana (afa-tsy bevohoka)
Hamirapiratra ny maso, kolaka miolakolaka tarehimarika, hatsarany sy ny fahasoavana - izany rehetra izany dia azontsika toetra.
Indray mandeha isam-bolana, isan-zazavavy, ny vehivavy avy tsarotra andro. Ny tapany voalohany ilay tonga fotoana voalohany mamokatra ny fihary atodinaina estrogen mavitrika, izay manampy ho matotra ny follicle miaraka amin'ny atody. Mandritra izany fotoana izany ny tranon-jaza dia mitombo tsikelikely anaty sosona - ny Ilay hoditra malemy mandrakotra.
Tamin'ny tapaky ny volana-tsingerin'ny ny famokarana atodinaina,: atody dia afaka amin'ny follicle, ny tenany follicle mampiova ny endriny ho amin'ny Corpus luteum, izay mamokatra ny hormonina progesterone, Izy, kosa, dia tompon'andraikitra amin'ny vohoka. Amin'ny tranga, Raha mbola tsy nisy fampiraisana, ny Corpus luteum tsikelikely mijanona miasa sy manjavona, tranon-jaza mandà accrued Ilay hoditra malemy mandrakotra, manomboka volana. Raha bevohoka mitranga, andro tsarotra tsy eo.
Healthy vehivavy tonga fotoana voalohany maharitra 21 ny 35, arakaraka ny tsirairay toetra ny taova.
Tonga fotoana voalohany - dia mitohy, ary tena sarotra dingana. ary misy antony hafa ankoatra ny tsy fahampian'ny isam-bolana bevohoka. na dia ny tena mahatonga ny bevohoka indrindra fa tamin'ny volana voalohany Izany no tsy fisian'ny tonga fotoana. Aza menatra hiala ao aminy, ary aoka hitondra ny Mazava ho azy fa ny zavatra. Izay mety ho tsy fahombiazana eo amin'ny vehivavy dia mety ho ny tena antony mahatonga ny aretina. Diniho izy ireo:
1. adin-tsaina. Family fanafintohinana, ady sy ny olana any am-piasana, overwork, tsy fahampian'ny torimaso, fanadinana sy ny fahoriana ara-tsaina - Tsy tsara ho an'ny vehivavy ny vatana. Izay tokony hatao: Raha afaka, Mankanesa ao amin'ny psikology, mitady ny antony mahatonga ny olana ary manamboatra azy, Miezaha hahazo ampy torimaso sy ny fitsaharana ny fotoana.
2. lanja. Tsy fahampian'ny lanja, ary koa efa tafahoatra ny, Tsy mitondra ho amin'ny fahatarana tonga fotoana. Normal olon-dehibe salama vehivavy ny eo ho eo ny haavony dia tsy tokony hilanja latsaka 47-50 kilao. Extra kilao fotsiny dia tsy afaka hanakana ny tonga fotoana voalohany, fa hanakorontana ny metabolism, hiteraka olana am-po, fahazavana, urogenital rafitra, sns. Ny tsy fahampian'ny lanja dia tsy maro fahatarana, fa mahafoana ny ampahany amin'ny isam-bolana mandrakizay, izay dia afaka ny ho tanteraka hahafaty. Very lanja ara-pahasalamana, fa tsy manadino ny momba ny sakafo voalanjalanja Na ahoana na ahoana.
3. fanatanjahan-tena be loatra. Aza manadino ny, Tokony hanao izay olona, ary ny vehivavy. Extreme fanatanjahan-tena koa mahatonga antony ny tsy fisian'ny isam-bolana raha tsy bevohoka.
4. mitaiza aretina. Tsy misy ilaina ny hoe: na inona na inona - faingana ho any amin'ny dokotera!
5. Vonjy taitra hormonina fanabeazana aizana manohitra vohoka tsy niriana sy ny fanafody nandritra ny aretina ihany koa ny mandray anjara amin'ny ny fahatarana tonga fotoana.
6. toetrandro. Tampoka ny fiovan'ny toetr'andro dia mety hisy fiantraikany tonga fotoana na ny fahatarana, ary ny tampoka tarehy.
7. Fanalan-jaza sy ny afa-jaza. Taorian'ny fitsaboana tsehatra amin'ny raharaha izany, mucous trompes utérine dia mampitohy curettage sitrana avy tamin'ny hafa rehetra. Ary koa hahatonga Tara tonga fotoana.
8. Nijanona hormonina aizana. Raha mandray ireo zava-mahadomelina, ny fihary atodinaina intsony ny asa ao amin'ny fampandrosoana ny atody. noho izany, Rehefa avy nijanona toy izany zava-mahadomelina, ny fihary atodinaina mety mbola 1-3 volana "notapahiny". Indrindra ny vehivavy indray mitokana rehetra amin'ity tranga ity, fa raha ny zavatra mampanahy be, dia tokony hijery dokotera.
9. climacteric. izany fotoana izany, Rehefa ny vehivavy vatana no mamarana ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny fampandrosoana ny atody. Manomboka ny hafa, indrindra taorian'ny 40 taona.
10. Be loatra fihinanana alikaola, sigara sy ny zava-mahadomelina.
Inona avy ireo famantarana ny bevohoka tamin'ny volana voalohany?
Famantarana ny maha-bevohoka ny ela tonga fotoana
Signs of bevohoka – famotsorana
Firy andro aorian'ny fotoana, ny famantarana voalohany ny maha-bevohoka?